साविक विजेता ‘मुम्बई’ पाँचौ पटक च्याम्पियन ! – KhabarQuick
साविक विजेता ‘मुम्बई’ पाँचौ पटक च्याम्पियन !
एजेन्सी: साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी२० क्रिकेटको १३औं संस्करणको उपाधि जितेको छ । युएईको दबुई इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा मंगलबार भएको फाइनलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै मुम्बईले लगातार दोस्रो तथा समग्रमा पाँचौ पटक उपाधि जितेको हो ।
सन् २०१० मा पहिलो पटक फाइनल पुग्दा पराजित भएको मुम्बईले त्यसयता हरेक फाइनलमा जित हात पार्दै उपाधि जितेको छ । मुम्बईले यसअघि २०१३, २०१५, २०१७ र २०१९ मा उपाधि जितेको थियो । पहिलो पटक फाइनल पुगेको दिल्ली भने उपविजेतामै चित्त बुझाउन बाध्य भयो । मुक्बईका कप्तान रोहित शर्माले समग्रमा छैटौं पटक उपाधि जिते । उनले सन् २००९ मा डेक्कन चार्जर्सबाट खेल्दै उपाधि जितेका थिए ।
रोहितले पहिलो विकेटका लागि क्वीन्टन डे कक र दोस्रो विकेटका लागि सूर्य कुमार यादवसंग समान ४५ रनको साझेदारी गरे । डेक पाँचौ ओभरको पहिलो बलमा २० रन बनाएर आउट भए । डे ककलाई दिल्लीका मार्कुस स्टोइनिसले ऋषभ पन्तद्वारा क्याच आउट गराए । ११औं ओभरको पाँचौ बलमा रनिङ विटविन र विकेटमा तालमेल नमिल्दा सूर्यकुमार १९ रन बनाएर रनआउट भए । रोहितले तेस्रो विकेटका लागि इशान किसनसंग ४७ रनको साझेदारी गरे । इशन किसनले १९ बल खेल्दै ३ चौका र १ छक्का मद्दतमा ३३ रन बनाए । दिल्लीका लागि एनरिक नोर्किएले २ तथा कागिसो रबाडा, र मार्कुस स्टोइनिसले १ विकेट लिए ।
Previous बाँके जिल्लाबाट आज ९ महिला र १२ पुरुष डिस्चार्ज
Next अरुण तेस्रोको अनुगमनमा किमाथाङ्का पुगे प्रधानमन्त्री